China Pụrụ iche akwụkwọ noodles na bowknot ọmarịcha akwụkwọ akpa igbe onyinye set Manufacturers and Factory | Yuxingyua
Pụrụ iche noodles na bowknot ọmarịcha akwụkwọ akpa igbe onyinye
Igbe onyinye dị mfe
Ọrụ nke igbe onyinye
Ọmarịcha, ọdịdị pụrụ iche nke nwere ike ịbịnye ihe, na igbe nkwakọ ngwaahịa mpụga nke na-achọ mma ma na-emegharị ihe.
Igbe onyinye ahụ bụ ngwugwu onyinye bara uru nke ejiri ebumnuche bụ isi nye ndị ikwu na ndị enyi onyinye iji gosipụta mmetụta ịhụnanya. Ọ bụ ndọtị ọrụ nke usoro nkwakọ ngwaahịa na mkpa mmekọrịta mmadụ na ibe ya. Igbe onyinye bụ ngosipụta nke obi anyị. Onyinye ịhụnanya anyị mere n'onwe anyị ma ọ bụ ngwaahịa ịhụnanya anyị na-azụta, na-enweghị isịneke, chọrọ nkwakọ ngwaahịa nke nwere ike igosipụta mmetụta ya, ma ọ bụ mmekọrịta ịhụnanya, ma ọ bụ ihe omimi, ma ọ bụ ihe ijuanya, ma ọ bụ ihe ijuanya, mgbe ị dị nwayọ ọhịa nzuzo na obi gị na igosi ya echiche dị iche iche ịchọrọ igosipụta. Nke a bụ ihe igbe onyinye pụtara.
Ntupu embossed elu onyinye igbe
Customizable onyinye igbe na ụta dị iche iche na agba onyinye
Echiche ọhụrụ nke igbe onyinye
Igbe onyinye a sitere na Goffret cadeau na French na Giftbox na Bekee
Ọ bụ ewu ewu n'oge a.
Echiche ọhụrụ banyere inye onyinye. Igbe onyinye abụghị ezigbo ngwaahịa, mana 15-20 kaadị. Kaadị ọ bụla na-anọchite anya ụdị ahụmịhe oge ezumike, nke onye ahọpụtara na-enweta igbe onyinye dịka mmasị ha si dị. E webatara echiche a na China site na mba Europe dịka France na Belgium. Companieslọ ọrụ onyinye onyinye ndị mepere emepe na ala gụnyere French Danlanshe na Igbe Onyinye, nke nwere nnukwu ahịa.
N’adịghị ka onyinye ọdịnala, igbe onyinye ahọpụtara ahọpụtara nke onwe bụ usoro eji eji ọfụma ahọrọ ọtụtụ ọ andụ na ọrụ, na ihe ewepụtara bụ ahụmịhe pụrụ iche na ịtụnanya. Ohaneze, igbe nnwale ahọpụtara nke onwe nwere obere ọdịdị mara mma. Igbe onyinye ọ bụla nwere kaadị mara mma ma ọ bụ akwụkwọ ntuziaka ahọpụtara, nke na-anọchite anya azụmahịa iri na abụọ na ọrụ ha. Onye nnata ahụ nwere ike ịhọrọ ọrụ ọ masịrị ya. Enwekwara kaadị ihe eji eme ihe iji nyochaa njirimara na ihe omume akwụkwọ, nke iji dee ma nwee ọ theụ ahụmịhe ahụ n'efu.
A mụrụ igbe onyinye nwere nhọrọ na France na 2003. N'oge na-adịghị anya, ọ ghọrọla ụdị inye onyinye na ahịa Europe dum, ma jiri nwayọ gbasaa na Japan, Brazil, United States, Australia, wdg. Dịka ọmụmaatụ, dakotabox na France na ụlọ ọrụ French Danlanshe, nke batara n'ahịa ndị ahịa China, na-enye mmemme ahụmịhe ntụrụndụ na njirimara French ma nye ndị ahịa ezigbo ahụmịhe ọrụ nlekọta
Ìhè-acha anụnụ anụnụ na-atọkwa onyinye igbe
Ahaziri Printing, ezi ákwà nchekwa igbe
Nke gara aga: Ahaziri akpụkpọ anụ agba na-atọkwa akpa akwụkwọ onyinye ọla igbe set
Osote: Ahaziri pearlescent agba elu dị iche iche embossed ọla onyinye igbe set
Ahaziri akpụkpọ anụ agba na-atọkwa akwụkwọ b ...
Ahaziri pearlescent agba elu dị iche iche em ...